फागुन भित्रै १५ हजार शिक्षकको विज्ञापन गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको यस्तो छ तयारी, कुन तहमा कति ? « Bagmati Online
फागुन भित्रै १५ हजार शिक्षकको विज्ञापन गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको यस्तो छ तयारी, कुन तहमा कति ?
सिफारिस भएको आधा महिना सम्म पनि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय भएको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक सातामै आयोगले १५ हजार स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ । खुला र बढुवा तर्फ गरेर आयोगले प्राथामिक तह, निम्म माध्यामिक तह र माध्यमिक तहमा गरि १४ हजार ७ सय ५२ पदका लागि विज्ञापन आव्हान गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको छ तर पदाधिकारी नियुक्तीमा भएको बिलम्बका कारण कुनै प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको आयोग श्रोतले बताएको छ।
यसरी जम्मा आएका रिक्त दरबन्दीमध्येबाट ५५ प्रतिशत खुलामा जाने छ र बाँकी रहेको ४५ प्रतिशत पदहरु मध्येबाट समावेशी तर्फ जाने छ। आयोगका रिक्त रहेको तीन सदस्यीय पदाधिकारी मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारीस भएर आएपछि उनिहरुको निर्णयपछि आयोगले विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । श्रोतका अनुसार फागुन मसान्त अगाडी नै आयोगले पुगनपुग १५ हजार शिक्षकको विज्ञापन गर्दैछ।